Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Mey, 2013, 09:44 GMT 12:44 SGA
Qaraxa dhacay maanta ayaa la isticmaalay gaari.
Ugu yaraan toban qof ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay jidka KM4 ee Magaalada Muqdisho. Taliyaha boliiska ee qaybta bartamaha gobolka Banaadir General Garaad Nuur ayaa xaqiijiyay dhimashada.
Waxaa qaraxa lala beegsaday gaariga Wasiirka Arrimaha Gudaha, laakiin gaariga waxaa saarnaa wafdi carab ah oo ka yimid dalka Qadar wayna ka badbaadeen qaraxa.
Wafdiga ayaa galabta ka dhoofay Muqdisho.